Ololli Wayyaanee Diddaa Qeerroon fashale; Dabballootni wayyaanees bubburuqan! | QEERROO
Ololli Wayyaanee Diddaa Qeerroon fashale; Dabballootni wayyaanees bubburuqan!
Posted on February 29, 2012 by Qeerroo
(Qeerroo, Adaamaa, 1 Bitootessa 2012) Diddaan Qeerroo karaa hundaan kan ishii mudee mootumaan Wayyaanee fiilmii kijibaa faayila keessaa baaftee agarsiisuun maqaa ABO xureessuuf yaalii gootus, bakka iyyuutti ummati amanuu fi fudhachuu diduu isaa Qeerroon gabaase.
Akka gabaasaan Qeerroo bakka addaddaa irraa walitti qindaa’e hubachiisutti, fiilmiin ololaa mootummaan wayyaanee sodaa Qeerroof jettee qopheessite sabboontotaan fashalaa jira.
Fiilmii dharaa mootummaan wayyaanee ABO irratti qopheessitee TV bittaa umrii ishee ittiin dheereffachuuf dhaabde irraan Guraandhal 29, 2012 galgala yeroo hoteelota keessatti darbaa turetti, Qeerroon alaabaa ABO TV sanitti maruun murannoo fi ololli diinaa akka duuba isa hin deebisne ifaan muldisuun mootummaa wayyaanee fi fayyadamtoota hoteela sanaa hubachiisee jira.
Keessaayyuu, Magaala Finfinnee Hoteela Yohaannis keessatti ololli diinaa yoommuu darbaa turetti Qeerroon mana kana keessatti ibsaa hoteela keessaa dhaamsuun jeequmsi guddaa kan uume yoo ta’u, TV mana kanaatti Alaabaa ABO maruun ifaan muldhisee jira.
Dabballooti Mootummaa wayyaanee dhimmicha tasgabbeessuuf naannoo kanatti yaates mataa bubburuqanii akka deebi’an Qeerroon dabalee ibsee jira.
Diddaan Qeerroo kunis haaluma wal fakkaataan magaala Adaamaa fi Amboo keessatti warren TV kana dhaggeeffatan irra deemuun cufsisiisaa akka tures gabaasti Qeerroo ni hubachiisa.
Jagnooti Qeerroon kana malees, manneen barnootaa addaddaa kan akka mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kuttaayee keessatti mallattoo Bilisummaa Oromoo kan ta’e, Alaabaan ABO akka balal’u gochuun sabboontota hedduu hamilchiisaanii jiru.
Qeerroon ibsa baase keessattis, hanga bilisummaatti waanti isa dura dhaabbatu irratti tarkaanfii akka fudhataa deemus beeksisee jira. Ololli diinaa kan fiilmii dharaan jalqabes kutannoo Qeerroon akka fashalu kan ibsame yoo ta’u, akka guyyaan garbummaa gabaabbatuufis Qeerroon diddaa isaa bakkeewwan ololli kun dabarfaman maratti akka kka itti fufu jabeessee dhaammatee jira.
2 thoughts on “Ololli Wayyaanee Diddaa Qeerroon fashale; Dabballootni wayyaanees bubburuqan!”
Ilyaas on March 1, 2012 at 12:40 am said:
Abshir numa bilisomma!!!
Ararsoo abdii on March 1, 2012 at 1:58 pm said:
Dhugaa keessani qeerroo ! Ololli bifa fedhee karuma fedheenu jaarraa 21ffaa kana keeysa if booda nu hin deebisu! Abdiis nu hin kutachiisu ! jabaa dha! Haa jajjabaannu! Haa wal-quba qabaannu! qabsaawaan ni kufa! Qabsoon itti fufa! Murataa teeysoo irra.